February 2020 – LOOFY
By The Loofy Team on 29 Feb 2020 • (0)
Profile Cuisine Chinese Specialty BBQ Famous BBQ Features Reservation, Smoking Area, Alcoholic Drinks, Take Away Delivery – Price 300 Ks – 10000 Ks Operation 9:00 AM – 10:00 PM Address No.7, Kyeik Wine Pagoda Road, Ward 3, Mayangone Contact 09799250665… Read More ›
SY Cafe & Restaurant
By The Loofy Team on 28 Feb 2020 • (0)
Profile Cuisine Burmese, Chinese Specialty Steamed Pork Belly, Lemon Prawn Famous Moke Hin Khar Features Air Condition, Reservation, Smoking Area, Plug-in Supply, Car Parking, Take Away, External Food Delivery – Price 600 Ks – 6000 Ks Operation 7:30 AM –… Read More ›
Kyun Daw Kitchen
Profile Cuisine Kachin, Chinese Specialty Zakaw Rice, Kachin Style Mutton Tea Leaves Salad Famous Zakaw Rice, Kachin Style Grilled Fish Features Air Condition, Reservation, Smoking Area, Plug-in Supply, Car Parking, Take Away Delivery – Price – Operation 10:00 AM –… Read More ›
Aroma2Indian Food (Yankin)
By The Loofy Team on 27 Feb 2020 • (0)
Profile Cuisine Indian Food Specialty Biryani Famous Lamb Masala Features Air Condition, Reservation, Car Parking, Take Away Delivery – Price 1000 Ks – 120000 Ks Operation 10:30 AM – 10:00 PM Address No.7, Kyauk Kone Road, Yankin Township, Yangon Contact… Read More ›
By The Loofy Team on 18 Feb 2020 • (0)
Profile Cuisine Taiwanese Specialty BBQ Famous Yunan Style Mala Flavoured BBQ Features Air Condition, Reservation, Car Parking, Especially Alcoholic Drinks Delivery – Price 300 Ks – 268,000 Ks Operation 5:00 PM – 11:00 PM Address No 22, Aung Zaya Road,… Read More ›
By The Loofy Team on 14 Feb 2020 • (0)
Profile Cuisine Thai Specialty Mala Xiang Guo, Spicy Seafood Famous Spicy Seafood, Crab, Prawn, Squid Features Reservation, Smoking Area, WiFi, Plug-in Supply, Car Parking, Alcoholic Drinks, Take Away, External Food Allowed Delivery – Price 500 Ks – 6000 Ks Operation… Read More ›
ဘော်ဒါတွေစုံပြီဆို မာလာရှမ်းကောဆီရောက်သွားတတ်တဲ့သူတွေအတွက် ဈေးတန်ပြီး စားလို့ကောင်းတဲ့ မာလာရှမ်းကောဆိုင်လေးများ
ပူပူစပ်စပ်တွေဆို ..စားချင်စိတ်တွေက တားမရ ဆီးမရပဲ ..ဟုတ် ??ပင်လယ်စာ၊ အသားစုံ၊ အသားလုံး၊ အသီးအရွက် စသဖြင့် ရွေးချယ်စရာအမယ်များပြီး အထုံအစပ်၊ အနှစ်အရသာ စုံလင်ကောင်းမွန်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး မင်မင်တို့ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ အမိုက်စား မာလာရှမ်းကောဆိုင်လေးတွေရဲ့ အကြောင်းကို အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပေးသွားဦးနော်… Spicy Pot ကျောက်မြောင်းထဲက Spicy Pot ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးက ဈေးနှုန်းလေးတွေ တန်တယ်။ ဘတ်ဂျက်ဆိုင်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ မာလာအနှစ်တွေက Homemade အနှစ်တွေဆိုတော့ အရသာတွေကတော့ တော်တော်လေးကောင်းပြီး အစပ်အဟပ်တော်တော်လေးတည့်တယ်။ မာလာအနှစ်ဖိုးကတော့ ၁၂၀၀ ပေးရတယ်။Set လိုက်လည်းရသလို စိတ်ကြိုက်ရွေးချင်လည်းရတယ်။ ၁၀၀ ကျပ်ကနေစပြီးရွေးလို့ရပြီး အသားတွေဆို တစ်ဗန်းမှ ဈေးအများဆုံး ၁၀၀၀… Read More ›
ဟော့ပေါ့ဆို အသည်းစွဲ ဈေးတန်တန် နဲ့ဘယ်မှာ စားရမလဲ ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက် ရန်ကုန်မြို့က အမိုက်စားဟော့ပေါ့ဆိုင်လေးများ
ဟော့ပေါ့ဆို အရည်လေးရှူးရှဲသောက် အသား / အသီးအရွက်တွေကို အချဉ်စပ်စပ်လေးနဲ့တို့စား….အဲ့လိုမျိုးစားရတာမျိုးကိုသဘောကျတယ်ဟုတ်? အရသာထိထိမိမိ လေးနဲ့ ဈေးလည်းတန် / အသားတွေလည်း လတ်ဆတ်တဲ့ ဆိုင်လေးတွေကို အောက်မှာပြောပြပေးထားတယ်နော်…… GRILL & CHILL ဒီဆိုင်လေးက အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ အဝစားဘူဖေးဆိုင်လေးပါ။သူ့ဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်လေးက ဟော့ပေါ့ + BBQ အကင် + Side Dishes ဟင်းပွဲ တွေ အကုန်လုံးကို လိုသလို အမှတ်ခြစ်ပြီး မှာစားရတာပါပဲ။ Buffet Package က Type A – 7800… Read More ›
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အမိုက်စား Stress Free Zone လေးများ
အိတ်ဖောင်းနေချိန် စိတ်ကောင်းဝင်လို့ကတော့ လာဟေ့….. Chill Out ကြမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် လကုန်ရက်လေး မှာ ကဲကြဖို့ ရန်ကုန်မြို့က Chill လို့ Fine တဲ့ဆိုင်လေးတွေ စုစည်းပေးထားပါတယ်။ ဆိုင်တွေရဲ့ မတူညီပဲထူးခြားတဲ့ အချက်လေးတွေအောက်မှာပြောပြပေးထားလို့ သေချာဖတ်ကြည့်ကြနော်…….. 96 Bistro ဒီဆိုင်လေးက ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းမှာ ဖွင့်ထားပြီး လူငယ်တွေ သောက်မယ် ပြီးရင် Challenge ဂိမ်းတွေ ကစားရင်း ပျော်ကြမယ်ဆိုရင် ကွက်တိပဲ။ ဒီဆိုင်လေးမှာက မလေးရှား စတိုင် အစားအသောက်နဲ့ BBQ အကင်တွေကို အရသာမိုက်မိုက်နဲ့ စားလို့ရတာက စာရေးသူကြိုက်တဲ့ အချက်ပဲ… Read More ›
Seafood Monster တွေအတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင်းက အားရပါးရ စားလို့ကောင်းပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ ပင်လယ်စာဆိုင်လေးများစီးရီး
ပင်လယ်စာစားရင်လတ်ဆတ်ပြီး ရှူးရှူးရှဲရှဲ အချဥ်နှစ်တွေနဲ့ မှ ပိုအရသာရှိတာ…ဟုတ်?လက်အိတ်တွေဝတ်ပြီး ပင်လယ်စာတွေကို သူတစ်‌ကောင် ကိုယ်တစ်ကောင် သာဆွဲလိုက်ရင် တစ်လောကလုံးမေ့သွား‌စေနိုင်မယ့်ဆိုင်လေးတွေကို ရွေးပေးထားလို့ ဆိုင်လေးတွေအကြောင်းကို အောက်မှာဆက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦးနော်………. စားတော်ပွဲ Seafood & Rakhine Cuisine ဆိုဒ်ကြီးဂိုက်ကြီး ကိုမှ အားရပါးရစားချင်ရင်တော့ ဆိုင်ခွဲ ၂ ဆိုင်တောင်ရှိတဲ့ ဒီဆိုင်လေးက တော်တော်မိုက်ပါတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဟင်းပွဲက Seafood တွေအပြည့်နဲ့ တစ်လံလောက်ရှိတဲ့ ဗန်းကြီးပါပဲ (၈ယောက်လောက်အမုန်းဆွဲလို့ရတယ် ) တစ်ဗန်းလုံးကို ကျောက်ပုစွန် ၊ Cray Fish ၊ ရေဘဝဲ ၊ ဂဏန်း… Read More ›